TCDD भर्ती ईन्जिनियरहरू | RayHaber
घरटर्कीकेन्द्रीय एनाटोलिया क्षेत्र06 अंकाराTCDD ईन्जिनियर भर्ती
28 / 11 / 2019 06 अंकारा, 35 इजमिर, केन्द्रीय एनाटोलिया क्षेत्र, रोजगारी, रेल, टर्कियन एजेज कोस्ट, साधारण, HEADLINE, टर्की
tcdd सांख्यिकीय ईन्जिनियर र pantor खरीद गर्दछ
रिपब्लिक टर्की राज्य रेलवे (टीसीडीडी) केपीएसएसको तथ्या ,्कसहित, ईन्जिनियरहरू र केन्द्रीय असाइनमेन्ट प्रणालीको साथमा विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला पुलिसको पदवीहरू, नागरिक कर्मचारीहरूको भर्तीको लागि बटन थिचे।
राज्य रेलवे एक्सएनयूएमएक्सले ओएसवाइएममा सरकारी कर्मचारीहरूको भर्तीको घोषणा गरेको छ उनीहरूलाई आधिकारिक चिठीको आवश्यकताको बारेमा बताउँदै। आंकरा र अज्मिर कोनाकका सहरहरूमा काम गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको लागि योग्यता कोडहरू प्रकाशित गरियो।
OSYM उम्मेद्वार लेनदेन
YSYM कार्य असाइनमेन्ट प्रक्रिया र आवेदन प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै आवश्यक काम गर्दछ। केन्द्रीय कार्यभारको रूपमा, कुनै पनि अन्य संस्थाले ओएसवाईएम बाहेक नियुक्तिहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्षम हुनेछ। साक्षात्कार र मौखिक परीक्षा लिईनेछ सरकारी कर्मचारीहरूलाई ओएसवाइएम उम्मेदवार लेनदेन पृष्ठमा आवेदन गर्न।
TCDD प्रकाशित प्रकाशित कर्मचारिको वितरण अनुसार 1 सांख्यिकी,2इन्जिनियर र3पोइन्ट तोक्न छनौट गर्नेछ।
जब प्राथमिकताहरू सुरू हुन्छ
2019 /2केन्द्रीय असाइनमेन्ट गाइडमा प्रकाशित जानकारी अनुसार, अनुप्रयोगहरू3दिसंबर 2019 मा सुरू हुन्छ र 12 डिसेम्बरमा समाप्त हुन्छ। अनलाइन आवेदनहरू यस अवधिमा बनाइनेछ।
स्टाफ शीर्षक İL PCS
Statistician अंकारा 1
इन्जिनियर अंकारा 2
Tally-कर्मचारी Izmir 3
TCDD6कर्मचारी वितरण को लागी सरकारी अधिकारी भर्ती क्लिक गर्नुहोस्.
लागू गर्न प्रक्रियाहरू
सुरु मिति: 03.12.2019 10: 00
अन्त्य मिति: 12.12.2019 23: 59
प्राथमिकता शुल्क: £ 20
भुक्तानी ठाउँहरू: अकब्यांक, एटीएम र इन्टरनेट बैंकिंगका सबै शाखाहरू (TRNC बाट आवेदन दिने उम्मेदवार बाहेक); Albaraka Türk सहभागिता बैंक, एटीएम र इन्टरनेट बैंकि; (TRNC बाट उम्मेदवारहरू बाहेक) का सबै शाखाहरू; फिनान्सब्याक, एटीएम र इन्टरनेट बैंकिंगका सबै शाखाहरू (TRNC बाट आवेदकहरू बाहेक); कुवेत टार्क कटालम बैंकका सबै शाखा, एटीएम र इन्टरनेट बैंकिंग (TRNC बाट आवेदक बाहेक); टर्क एकोनोमी Bankası र इन्टरनेट बैंकिंग को सबै शाखाहरु; हल्कब्याक एटीएम, इन्टरनेट बैंकिंग र शाखा; आईएनजी बैंक र इन्टरनेट बैंकि ofका सबै शाखाहरू (टीआरएनसी बाट उम्मेदवारहरू बाहेक); Vakıf सहभागिता बैंकका सबै शाखा र एटीएमहरू (TRNC बाट आवेदकहरू बाहेक); जीराट बैंकले केवल इन्टरनेट बैंकि and र मोबाइल बैंकिंग प्रयोग गर्दछ (शाखा र एटीएमबाट कुनै शुल्क लिदैन); OSYM कार्ड भुक्तान प्रणाली (https://odeme.osym.gov.tr/)
दोहो मेट्रोमा निर्माण
दुवै अभियंता र अभियंता र शिक्षक र आमा
TCDD असुरक्षित श्रमिकहरू
TCDD पूर्व सजाय भर्ती गर्दैछ!
TCDD सार्वजनिक कर्मचारी भर्ती
TCDD कर्मचारी भर्ती